Lola Tigiraay: Qaamoleen Tigraayitti wal waraanan ‘yakkoota waraanaa fi dhala namaarratti’ lakkaa’amu raawwatan | Kichuu
Posted on March 4, 2021 by kichuu_admin
Qaamoleen naannoo Tigraayitti wal waraanan sarbama mirgoota namoomaa gurguddoo akka ”yakka waraanaafi yakka dhala namaarratti raawwatamanitti” lakkaa’amuu malan raawwataniiru jedhe komishiniin mirgoota namoomaa UN.
(bbc)—UNtti Komishinarri Olaanaa Mirgoota Namoomaa (OHCHR) Misheel Baachelet waan jedhan, gabaasaaleen ciccimoofi amanamoo tahan sarbama mirgoota namoomaa Itoophiyaa, Tigraayitti raawwatamuu naannicha keessaa bahaa jiru jedhan.
Kanaafis qorannoo mirgoota namoomaaf atattamaan ulaan banamuu qaba jedhan qondaalli kun.
Gabaasni guyyaa Kamisaa bahe kun, Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanitti Manni Maree Nageenyaa rakkoo nageenyaa Tigraay irratti mari’achuuf wayita eegamaa jirutti.
Baachilet ibsa baheratti, mootummaan Itoophiyaa ittigaafatamummaa fudhachuurratti ibsa baase kan simatan wayita tahu, kanneen qarqaarsa godhaniif ulaa banamuuf tarkaanfilee fudhatamanis akka waan gaaritti ilaalan.
Aadde Misheel maal jedhan?
”Gabaasaaleen guddoo nama jeeqan, kan haaleellaa saalaa, ajjeechaa hin malle, badii hamaa fi saamichi qabeenya uummataafi dhuunfaa; qaamolee wal waraanan hundaan raawwataman nu qaqqabaa jiru,” jedhan komishinarri olaanaa kun.
Ammallee waraanni giddugala Tigraayitti adeemaa akka jirus gabaasaaleen ni mul’isu jedhan Aadde Misheel Baachileet.
Kana malees ”ragaaleen amanamaaa sarbama seera mirgoota namoomaa idil-addunyaa qaamolee hundaan raawwatame agarsiisu bahaa jirus,” jedhan.
Ibsi Kamisa har’aa Jenevaarraa bahe kun fakkeenyota sarbama mirgoota namoomaa na qaqqabe jedhes ni eera.
Isaan keessaas maddeen amanamoo irraa odeeffannoo argachuu ibsuun, Addigraat, Maqalee, SHiree fi Wuqirootti – Guraandhala 9 fi 10 gidduutti mormitoonni saddeet humnoota nageenyaan ajjeefamuu hima.
Muddee fi Amajjii dabre keessa dirqiin gudeeduu 136 hospitaalota Maqalee, Ayidar, Addigraat fi Wuqroo gabaafamuus ibsichi ni hima.
Waajirri isaanii odeeffannoo haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaan magaalota Maqalee, Humaraafi Addigraatitti raawwatame mirkaneesseera jedha.
Kana malees gabaasni ajjeechaa jumlaafi sarbama mirgaa magaalota Aksum fi Dangalaat keessatti loltoota Ertiraan raawwate isaan bira gahus hima ibsi guyyaa Kamisaa bahe kun.
Torban dabre keessas gabaasa Aminastii Intarnaashinaal baaseen, ajjeechaan jumlaa magaalaa Aksumitti loltoota Ertiraatiin raawwateera jedhera.
Xiinxalli odeeffannoowwan waajiricha gahan kan marroo duraa akka agarsiisanitti, waantonni raawwataman jedhaman ”sarbama hamaa seera idiladdunyaa: kan yakka waraanaafi yakka dhala namaarratti raawwatameen” qixxaachuu danda’a jedha.
Akka ibsichaatti yakki raawwatame jedhame kun kan raawwatame qaamolee: Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa, TPLF, waraana Ertiraafi Humnootaafi milishoota naannoo Amhaaraan tahuu ibsi komishinichaa ni hima.
Kana malees Aadde Misheel Baachileet, gaazexeessitootaafi afaan hiiktota naannichatti hidhaman ilaalchisee yaaddoo qabanis ibsaniiru.
Isaan keessaa gaazexeessaan BBC naannoo Tigraay keessaa gabaasu Girmaay Gabruu hidhaa guyyoota lamaa booda himata malee gadhiifameera.
Dhumarrattis komishinarri olaanaan kun gama mootummaatin waadaan galame hojiitti akka hiikamu gaafataniiru.
”Qorannoo atattamaa, walabaafi bilisa tahe taasifamuun, kanneen kana raawwatan seeratti hin dhiyaatan taanaan: sarbamni ittuma fufuun… haalichi tasgabbii malee yeroo dheeraaf tura,” jedhan.